यि हुन नेपाली सिनेक्षेत्रका चर्चित डिभोर्स गर्ने नायिकाहरु – Khabar Silo
पछिल्लो समय नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा क्रियाशील नायिकाहरुको डिभोर्सको घटनाहरु धेरै नै आउने गरेका छन् । केही समयअघि मात्र निर्देशक छवि ओझा र नायिका सिल्पा पोखरेलको डिभोर्सको कुराले सामाजिक सञ्जाल नै तातेको थियो भने केही दिन अघिमात्र पूर्व मिस नेपाल उषा खड्की र जीपी तिमल्सिनाको डिभोर्सको खबरले खैलाबैला मच्चिएको थियो । यसरी एकपछि अर्को गरी नायक–नायिकाको डिभोर्सको कुरा बाहिर आउनु खासै नौलो रुपमा हेरिएको देखिदैन ।
डिभोर्सपछि दोस्रो विवाहलाई पनि सामान्य नै मानिन्छ । सँगै मर्ने सँगै बाँच्ने कसम खाएर वैवाहिक जीवनमा बाँधिएका थुप्रै जोडीको दाम्पत्य जीवन असफल भएको हामीले देखेका छौं । पारिवारिक जीवन जीउने क्रममा आपसी मतभेद त हुन्छ नै । सामन्यतया अविश्वास, आशंका र चरम महत्वकांक्षाले उनीहरुलाई अलग गराउने गरेको पाइन्छ । नेपाली सिनेमामा डिभोर्स गर्ने कलाकारको लिष्ट लामो छ ।
नेपाली सिनेक्षेत्रका चर्चित डिभोर्स
रेखा थापा नेपाली चलचित्र क्षेत्रकी एक चर्चित अभिनेत्री तथा निर्मात्री हुन् । उनी नेपाली सिने क्षेत्रमा हिम्मतवाली नायिकाका रुपमा पनि परिचित छिन् । हिरो चलचित्रबाट रजतपट प्रवेश गरेकी रेखा निर्माता हुँदै निर्देशकसमेत बनेकी छन् । निर्देशक छवि ओझासँग विवाह गरेकी थापाको वैवाहिक सम्बन्ध लामो समयसम्म भने टिक्न सकेन । एक दशक लामो बैबाहिक सम्बन्धलाई ब्रेक लगाएकी रेखा हाल एक्लै बस्दै आएकी छिन् । छविसँगै बसेका बेला रेखाले आफ्नो नाममा चलचित्र ब्यानर खोलेर थुप्र्र्रै चलचित्र बनाइन् । हिम्मतवाली चलचित्रको त उनी निर्देशकसमेत भइन् । रेखा पछिल्लो समय राजनीतिमा सक्रिय छिन् ।
म्युजिक भिडियोहुँदै फिल्म क्षेत्रमा जमेकी नायिका हुन्, रिमा विश्वकर्मा । नेपाली टेलिभजनमा सबैभन्दा ठूलो गायन प्रतियोगिताको रुपमा परिचित नेपाल आइडलको उद्घोषक बनेपछि उनी अझ चर्चित बनेकी थिइन् । २०१५ सेप्टेम्बरमा रोबर्ट विकसँग विवाह गरेकी विकले डिभोर्स लिइसकेकी छिन् । उनको विवाह दुई वर्ष पनि टिकेन ।
पछिल्लो समय सबैको रोजाइमा रहेकी नायिका हुन् पूर्वमिस टिन प्रियंका कार्की । अहिले प्रियंका र आयुष्मान विवाह गर्ने तयारीमा छन् । उनीहरुले केही समय अगाडि इन्गेजमेन्ट गरिसकेका छन् । तर, प्रियंकाको यो पहिलो विवाह भने होइन । सिनेमा पढ्न अमेरिका पुगेको बेला २३ वर्ष उमेरमा प्रियंकाको विवाह रोचक मैनालीसँग भयो । यो उनको प्रेम विवाह थियो । तर विवाह भएको तीन वर्षमा उनै प्रियंकाले यो सम्बन्धबाट अलग हुने निर्णय गरिन् । आफू स्वतन्त्र भएर जीउन चाहेका कारण रोचकसँग अलग भएको उनी बताउँछिन् ।
नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा एक समय खुबै चर्चामा आएकी सुन्दर नायिका सञ्चिता लुइँटेल र आकाश शाहबीच प्रेम विवाह भयो । विवाह भएको केहीसमयपछि उनीहरुको सम्बन्धमा खटपट आयो र अन्ततः डिभोर्स दिने निर्णयमा पुगे । आकाशलाई डिभोर्स दिएर सञ्चिताले नायक निखिल उप्रेतीसँग लगनगाँठो गाँसेकी छिन् । अहिले निखिल र सञ्चिताको पारिवारिक जीवन सामान्य रहेको छ ।
गौरी मल्ल नेपाली चलचित्र क्षेत्रको एक चर्चित अभिनेत्री हुन् । उनले धेरै नेपाली तथा केही विदेशी चलचित्रमा समेत काम गरिसकेकी छिन् । अब्बल अभिनयका कारण उनी नेपाली सिने बजारमा सदाबहार छिन् । करियरकै उचाइमा रहेका बेला उनले प्रज्वल भण्डारीसंग विवाह गरेकी थिइन् । प्रज्वलसंग वैवाहिक सम्बन्ध नटिकेपछि अन्ततः उनीहरु अलग्गिए । गौरीले अहिलेसम्म अर्को विवाह नगरी एक्लै बस्दै आएकी छिन् ।
पछिल्लो समय चलचित्र क्षेत्रबाट टाढा रहेकी नायिका अरुणिमा लम्सालले पनि डिभोर्स गरेकी छिन् । लम्सालले व्यापारी अमित अर्यालसँग विवाह गरेकी थिइन् । तर उनको सम्बन्ध पनि धेरै टिकेन । उनले पति अर्यालसँगको वैवाहिक जीवनलाई १२ वर्षसम्म मात्र निरन्तरता दिइन् ।
अभिनेत्री मनिषा कोइरालाले आफ्नो रियल लाइफ निकै उतारचढाव बेहोरेकी छिन् । बलिउडमा ९० को दशकमा निकै चम्किएकी अभिनेत्री मनिषा कोइराला बलिउडकी चर्चित नायिका थिइन् । सन् २०१० मा सम्राट दाहालसँग घरजम गरेकी मनिषाको वैवाहिक जीवन लामो समय टिक्न सकेन । उनले दुई वर्षपछि नै श्रीमानसँग डिभोर्स गरिन् ।
झरना बज्राचार्य नेपालकी एक चर्चित अभिनेत्री र मोडल हुन् । उनी १६ वर्षको उमेरमै मिस नेपाल १९९७ भएकी थिइन् । ब्रिटिश नागरिकसँग विवाह गरेकी झरना बज्राचार्यको सम्बन्ध लामो टिक्न सकेन र अन्ततः डिभोर्स गरिन् । उनले अहिले निर्माता राहुल अग्रवालसँग दोस्रो विवाह गरेकी छिन् ।
चलचित्र नोभेम्बर रेनबाट चर्चामा आएकी चुल्ठिमले गाएक धिरज राईसँग विवाह गरेकी थिइन् । छुल्ठिमको बैबाहिक सम्बन्ध पनि लामो समयसम्म अघि बढेन । उनीहरु के कारणले अलग भए भन्नेकुरा खुलाइएको छैन । हाल उनी एक्लै बस्दै आएकी छिन् । उनीहरुको २०१३ मा डिभोर्स भएको हो ।
मौसमी मल्ल कुनै समयकी चर्चित नायिका हुन् । उनले १५ वर्षकै उमेरमा धन विक्रम मल्लसंग विवाह गरेकी थिइन् । विवाह भएको ९ वर्षपछि मौसमीले डिभोर्स गरेकी हुन् ।
नायिका कृति भट्टराईले पत्रकार रवी श्रेष्ठसँग विवाह गरेकी थिइन् । परिवारसँग विद्रोह गरेर उनले सञ्चारकर्मीसँग विवाह गरेकी हुन् । तर उनीहरुको विवाह सम्बन्ध लामो समयसम्म टिक्न सकेन । अभिनेत्री कृतिले अहिले इन्जिनियर रोहित पौडेलसँग दोस्रो विवाह गरेकी छन् ।
अभिनेत्री सुस्मिता केसीले अभिनेता भुवन केसीसँग विवाह गरेकी थिइन् । भुवनको सुस्मितासँग दोस्रो विवाह थियो । तर यी दुई बीचको वैवाहिक सम्बन्धसमेत लामो समय टिक्न सकेन । यतिबेला एक्लै जीवन बिताइरहेकी छिन् ।
एउटा दाम्पत्य सम्बन्ध सफल नभएर अलग भएका दम्पतीहरु अर्कोसंग घरजम गर्ने तयारी गर्छन् । तर डिभोर्सपछि एक्लै गुजारा चलाइरहेका पनि छन् । अझ कला क्षेत्रमा त झनै धेरै छन् ।
मध्यरातमा शिल्पा शेट्टीको घरमा फेला परे सलमान खान
Posted on February 10, 2021 February 10, 2021 Author khabar silo
काठमाडौं । बलिउड सुपर स्टार सलमान खानको अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीसँग कस्तो सम्बन्ध थियो ? आज पनि उत्तिकै चासो राखिन्छ । यसबारे पहिलोपटक शिल्पाले आफ्नो कुरा सार्वजनिक गरेकी छन् । धेरैवटा फिल्ममा सँगै काम गरेका उनीहरुबीच प्रेम सम्बन्ध रहेको चर्चा चलेको थियो । यसबारे शिल्पाले अहिले आएर आफ्नो कुरा सार्वजनिक गरेकी हुन् । शिल्पाकाअनुसार सलमान निकै […]
मोडेल अदितीसँग शिशिर भण्डारीको अनस्क्रिन रोमान्स । प्रविशा अधिकारी र सिडी बिजय अधिकारीको आवाजमा ‘म जीउन सक्दिंन’को भिडियो आयो (भिडियो हेर्नुस)
Posted on November 24, 2021 Author khabar silo
शिशिर भण्डारीको अभिनयमा नयाँ गीत म जीउन सक्दिँनको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । यस गीतमा शिशिरले नयाँ मोडेल अदिती खरेलसँग रोमान्स गरेका छन् । यता अर्का पुरुष मोडेलमा निरायु गौतम रहेका छन् । कालिन्चोक र पाँचखालका रमणिय दृश्यहरुमा खिचिएको गीमा ऊँ सुनारको शव्द र सँगीत रहेको छ । कुनै फिल्मको गीत भन्दा कम नलाग्ने यस […]
कति छ ‘केजीएफ’ सुपरस्टार यश को सम्पत्ति ?
एजेन्सी । सन् २०१८ डिसेम्बर २१ मा प्रदर्शन भएको फिल्म ‘केजीएफ’ ले दक्षिण भारतीय अभिनेता यश लाई उनको करिअरमा थप उचाईमा पुर्याएको थियो । उक्त फिल्मले बक्स अफिसमा थुप्रै रेकर्डहरु पनि बनाएको थियो ।उनै सुपरस्टार यशले एक दर्जनभन्दा बढि साउथ फिल्ममा काम गरेका छन् । उक्त सुपरहिट फिल्मको सिक्वेल सन् २०२० मा रिलिज हुनेछ भने […]